Gabadha barafka: yaa qoray, waxay ku saabsan tahay iyo la qabsiga | Suugaanta Hadda
Gabadha barafka ma aha buug dhawaan soo baxay. Xaqiiqdii, waxay soo baxday 2020 waxayna noqotay iibiyaha ugu wanaagsan, sida buugaagtii hore ee qoraaga. In kasta oo hore loo yaqaanay oo la mahadiyey, haddana buuggu wuxuu aad ugu sii badan yahay la -qabsikiisii ​​dhowaa ee taxanaha Netflix, oo mar kale ku sharraxaya qorayaasha Isbaanishka taxanahooda Isbaanishka.
Laakiin maxay tahay inaad ka ogaato Gabadha Barafka ah? Ma taqaan cidda qortay? Maxay ku saabsan tahay? Haddii uu yahay buug gaar ah ama ma jiraa sii socosho? Waxaan ka jawaabnaa wax walba, iyo wax kaloo badan, xagga hoose.
1 Yaa qoray Gabadha Barafka ah?
2 Waa maxay Gabadha Barafka ah?
3 Waa maxay nooca ay tahay Gabadha Barafka?
4 Ma jiraa sii socoshada buugga?
5 Ma jiraan hoy?
Yaa qoray Gabadha Barafka ah?
Haddii ay tahay inaan tilmaamno 'dambiile' in Gabadha Barafka ka soo muuqatay dukaamada buugaagta sannadka 2020 markaa taasi waa Javier Castillo. Isagu waa qoraa quduus ah, maadaama buug -gacmeedkani uusan ahayn kii ugu horreeyay, laakiin uu ahaa kii afraad. Buugaagtiisii ​​ugu horreysay, "Maalintii miyir -beelku luntay" iyo "Maalintii jacaylku luntay", ayaa ku kalliftay inuu guulaysto tan iyo markaasna wuxuu ku guulaysanayay mid kasta oo ka mid ah sheekooyinka uu soo saaray.
Laakiin waa kuma Javier Castillo? Qoraagaani wuxuu ku dhashay Malaga 1987. Buuggiisa ugu horreeya waxaa la qoray isagoo u socdaalaya tareenka una socda shaqadiisa (lataliye maaliyadeed) ilaa gurigiisa. Markii la dhammeeyay, oo uu u maleeyay in sheekooyinkiisu aad uga wanaagsan yihiin kuwii la daabacay, wuxuu go'aansaday inuu u qoro daabacayaasha si uu u tijaabiyo nasiibkiisa. Hase yeeshee, way diideen, wuxuuna go'aansaday inuu isagu is-daabaco. Sidaa darteed, markii uu bilaabay inuu guuleysto (oo aan ka hadlayno iibinta in ka badan kun buug maalintii Amazon), daabacayaashu waxay bilaabeen inay garaacaan albaabkiisa.
Si aad u badan si uu awood ugu yeesho inuu macsalaameeyo shaqadiisa lataliye maaliyadeed si uu waqtigiisa oo dhan ugu qaato qorista sheekooyin cusub, isagoo og in guushu isaga la jirtay, sidii dhacdayba.
Waa maxay Gabadha Barafka ah?
Gabadha Barafka ah waxay leedahay qorshaheeda ugu weyn a Dhacdadii dhacday 1998 -kii taas oo ka dhigaysa nolosha waalidnimo ee waalidku gabi ahaanba inay is -beddesho. Marka gabadha 3-sano jirka ah ee lammaanaha la waayo raad la'aan, qof walba waa lumayaa, isagoo aan garanayn meel uu wax ka raadsado ama sida loo caawiyo waalidiinta aan jawaab ka helin meesha ay gabadhoodu joogto.
Si ka duwan sheekooyinka kale, Qasrigan wuxuu ku muujinayaa sida dareenka dadkaas ku lugta leh ay yihiin, waxa ay la kulmaan iyo sida ay yihiin shucuur ahaan, wax aan, buugaagtii hore, aan sidaa loo arag.
Waxaan kaaga tagnaa qoraal kooban:
Aaway Kiera Templeton? New York, 1998, Parade Thanksgiving. Kiera Templeton, ayaa ku dhex baxda dadkii badnaa. Baaritaan waali ah ka dib magaalada oo dhan, qof ayaa ka helaya dhawr timo oo ku dhegan dharka ay inanta yari xidhnayd. Sannadkii 2003, maalintii Kiera ay siddeed jirsan lahayd, waalidkeed, Aaron iyo Grace Templeton, waxay guriga ka helaan xirmo yaab leh: cajalad VHS ah oo duubitaan hal daqiiqo ah oo Kiera ku ciyaaraysa qol aan la aqoon. Ka dib markii uu iibiyey in ka badan 650.000 oo nuqul ka mid ah sheekooyinkiisii ​​hore, Javier Castillo ayaa mar kale miyir -qabka ka ilaalinaya Gabadha Barafka, safar mugdi ah oo ku jira qoto -dheer Miren Triggs, arday saxafinimo ah oo bilaaba baaritaan barbar -socda isla markaana ogaada in labadeeda nololeedba Kiera's waxaa ka buuxa wax aan la aqoon.
Waa maxay nooca ay tahay Gabadha Barafka?
Gabadha Barafka, sida buugaag badan oo Javier Castillo ah, Waxay ku jirtaa nooca shakiga. Maskaxda ku hay in ay ku saabsan tahay daah -furka qarsoodiga, waana sababta uu qoraagu u adeegsado laba waqti oo uu dhex -dhexaadinayo.
Qaabkan wax loo qoro ayaa ah mid qatar ah oo akhristayaal badan oo markii ugu horraysay soo amba -baxay ayaa laga adkaan karaa sababtoo ah daqiiqad kasta ma garanaysid inaad hadda joogto, waagii hore. Laakiin taasi waa bilowgii uun, marka aadan weli garanayn jilayaasha; markaa arrimuhu way is beddelaan oo qalloocyada ku jira ma aha oo kaliya inay kaa caawiyaan inaad fahanto sababta jilayaasha ay sidan oo kale u yihiin, laakiin sidoo kale isla markiiba waad garatay jadwalka la raacay (oo labaduba waxaa ku jira qarsoodi).
Ma jiraa sii socoshada buugga?
Javier Castillo waa qoraa u janjeera inuu dhexgalo buugaagtiisa, ama uu sii wado. Waxay ku dhacday isaga oo leh “Maalintii waalidu luntay”, taas oo u malaynaysay inay tahay laba buug, ka dib guushii hore, ma uusan ka labalabeyn inuu shaqada u dhaadhaco si uu u helo qaybta labaad. Laakiin ka warran Gabadha Barafka leh? Ma jiraa qayb labaad?
Hagaag, qoraaga laftiisu su’aashan ayuu uga jawaabay akhristayaashiisa, isaga oo arrinta xalliyay. Waana taas, si ka duwan sida buugaagta kale, tan gaar ahaan midna kama mid noqon doono sheeko kasta, sidaa darteed waxaan ka hadlaynaa buug leh bilow iyo dhammaad, oo aan ka badanayn. Dabcan, boggeeda dhexdiisa waxaan ka heli karnaa jilayaal haddii, haddaad akhriday shaqooyinkii hore, aad si fiican kuugu garan doonto. Haddaba, si uun, waa sii socosho, oo leh jilayaal kale, oo ka mid ah sheekooyinkii hore ee qoraaga.
Ma jiraan hoy?
Waa inaan kaaga dignaa, sida buugaag kale oo badan, Gabadha Barafka ah ayaa sidoo kale la qabsan doonaa sawir dhab ah. Gaar ahaan, waxay ahayd Netflix oo danaynayey inuu helo xuquuqda oo duubto taxane.
Illaa iyo hadda, wax badan lagama oga taxanahan cusub, laakiin warku wuxuu soo baxay Abriil 2021 iyadoo la tixgelinayo in Netflix aad u dhakhso badan tahay marka go'aannada la gaarayo, waxa ugu badbaado badan ayaa ah in laga yaabo marka la gaaro 2022 ama 2023 inaan daawan karno.
Intaa waxaa dheer, qoraagu aad buu u faraxsan yahay maxaa yeelay Gabadha Barafka ah maahan la -qabsiga kaliya ee sheekooyinkiisa. Sidoo kale, kiiskan, iyada oo loo marayo Globomedia iyo DeAPlaneta, waxay ka shaqeynayaan taxane ka koobnaan doona labada sheeko ee ugu horreeya ee qoraaga: "Maalintii waalidu luntay" iyo "Maalintii jacaylku lumay." Illaa hadda wax laga ogyahay iyaga ma jiraan, laakiin hubaal in war iyaga ku saabsan ay dhowaan soo gaari doonaan.
Ma akhriday buugga The Girl Girl? Maxaad ka qabtaa arrintaas? Noo sheeg aragtidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Gabadha barafka
Halxiraalihii qolka 622